Janaayo 29, 2004
Maxaa Looga Xusaa Soomaaliya Maalinta Nabadda Adduunka?
Qof kasta oo ku nool dalka Maraykanka ama soo booqday ama asagoon iman waxbadan ka bartay dalka maraykanka waxaa uu og yahay in dhismayaasha qaarkood ama warqadaha rasmiga ah qaarkood ama kuwa ay hay’adaha (kuwa guud ama kuwa gaar) ay isku xayeeysiiyaan ku arkayaa hadallo oranaya “we do not discriminate any one regarding race, religion, national origin, age, gender,and color etc." Kelmadahan macnahooda oo af Somali ah waa sidan: dadka ma takoorno anagoo ku riixayna kooxda ay ka soo jeedaan, diintooda, dalka ay ka soo jeedaan, inay lab yihiin iyo inay dhiddig yihiin, da’dooda, midabkooda iwm. Sidoo kale “Equal Opportunity” oo ay macnaheedu tahay fursadaha waa loo siman yahay.
Su’aasha meesha ku jirtaa waxay tahay maxaa ku kalifay dadkaan inay meel walba ku qoraan hadaladan macaan? Jawaabta oo kooban waa waxay garteen oo qirayaan in waxan oo dhan ay dulmi jiray ahayd (weli ma wada dhamaan) oo aan loo baahnayn iyo in ay muujiyaan in ay gaareen bisayl xadaarad ku dhisan waxaa intaas u weheliya soo jiidasho macaamiil iyo iska ilaalin dacwo. Inkastoo ay hadda u eg yihiin kelmado waayo aragnimo iyo ilbaxnimo huwan haddana qofkasta oo soo booqdaa maraykanka kelamadahan waxay isla markiiba xusuusinayaan dulmiga ka dhacay meeshan iyo qaradiisa siday u weynayd.
Waa shaqo helid, waa guri ijaarasho ama dhisasho, waa meel aad rabto in aad degto ,waa waxbarasho iyo jaamacado, waa midab takoor aadan meelna uga fakanayn, waa maxaa dhidig kaa dhigay oo aadan meelna uga fakanayn, waa maxaad diintaan u qaadatay oo aadan meelna uga fakanayn, waa maxaa da’daan ku joojiyay oo aad weliba faqiir u tahay oo aad shaqo u raadinaysaa iwm.
Haddii aan soomaaliya u soo laabto weligay ma arag meel Soomaali isugu timaado oo maalinta nabadda addunka lagu xusayo oo calan cad iyo shibirta qoolayda cad masawirkeeda la wado oo lagu qaylinayo NABAD NABAD NABAD NABADDA HA WAARTO. Qof aanan la socon dhibta Soomaalida iyo siday waayahan danbe isu dilaan ama dagaalka ugu fudud yahay waa uu garan karaa in meesha wax ka dhaceen oo dawladdii Soomaaliya iyo qaranimadii, ammaankii, iyo xasiloonidii la waayay. Balaayo markey adiga kaa maqan tahay qof kale ayay ku maqan tahay waxaa laga yaabaa in mudadii berisamaadka ay Soomaalida ku jirtay meelo badan oo addunka ah laga la’aa nabad oo ay dadkaasi maalinta nabadda addunka xusi jireen annagoon warba u hayn.
Qoloba maalin ayay ku biiri doontaa xuska maalinta nabadda addunka oo hadda dad aan ogayn in ay jirto maalinta nabadda adduunka ayaa baran doonta. Haddase meesha loogu weynayn badan yahay maalintaas waa Soomaaliya – Dheriga maxaa karka ka keeno?-- dabka.
Ujeedadayda ma aha in aan dhaleecaynayo Soomaalida dadaashay ee xusta maalinta nabadda adduunka ee waa in haddii aan soomaali nahay aan ka waantoowno dagaalkan aan qolana ku macaashayn waayo dagaaladii hore ayaan weli ka kabsan la’ nahay oo waataas 300, 000 oo caruur u badan nooga dhinteen macluushii ay colaadda jabhadaha sababtay agagaarka Baydhabo iyo koofurta Soomaaliya. Inta xabadda leeftay ay kor u dhaafayso 50,000 oo qof. Waxaase intaas ka daran inta la bara kiciyay, inta hadda dawlad daryeesho la’, inta badaha ku dhinta, inta dunida u qaxday oo dhaqankii iyo diintiiba laga lumiyay, inta dibadaha ku dhibaataysan, inta gudaha ku dhibaataysan, ayadoo weliba garoonkii iyo dekeddii Muqdisho xiran yihiin. Xoolahii, baddii, iyo degaankiiba warkood daa!/
Maamul xumadii dawladii keligii taliyaha waxaa Soomaalida uga danbeeyay jabhado kasii daray asaga 100% oo aan marnaba la barbardhigi karin oo umadda Soomaaliyeed gaarsiiyay inay u kala dhuuntaan cadawgooda oo weydiistaan inuu dawlad u dhiso. Waxaa lagu dagaalay oo la isku dilay waxkasta oo aan xataa qiimo lahayn weliba waxaa laga cabsi qabaa in dagaal cusub oo ku salaysan xuduud uu isticmaarkii reer yurub (Ingriiska iyo talyaaniga) u samayteen inay ayaga (ma aha Soomaali waayo Soomaalida hore ayay isu tiqiinay) isku kala gartaan qarniyaal hore maanta Soomaalida isku disho. (waa caybta adduunka ugu daran iyo doqonimo).
Somalia: UN relief official condemns murders of women and ...
UN News Centre - Jan 26, 2004
... to Xudur and Waajid villages in the Bakool region of southwestern Somalia ... a Waajid assembly of elders pursuing peace negotiations, Mr. Gaylard called on Somali
Bal u fiirso warkii ugu danbeeyay ee Somaliya: UN ayaa tiri waxaan ka wel welsanahay dilka ka dhacaya Koofurta Soomaalida ee lala beegsanayo caruurta iyo haweenka Soomaaliyeed oo ay ku kacayaan rag Soomaaliyeed oo hubaysan. War ma saas ayaa u danbaysay Soomaalida in la yiraahdo caruurtiina iyo haweenkiina ha laynina wax u tar haba joogtee! Haddii uu qaran dumo iyo sharaf ma saas ayaa hoos loogu dhacaa? Nimanka falkaas ku kacay waxay dhaawaceen Soomaalida oo dhan meelkasta ha joogaane ma aha koofurta Soomaaliya oo kaliya. Waxay dhaawaceen haddaan isticmaalo magacyada Soomaalida loogu kala yeero waayadan Soomaali galbeed, Puntland, Somaliland, jabuuti, NFD iyo sharafta muslimiinta addunka oo aan looga baran inay ugaarsadaan caruur iyo haweenba.
Waxba kuma jabna in la xuso maalinta nabadda adduunka laakiin xuska ugu fiican waa in la joojiyo dhiiga dadka Soomaaliyeed oo la iska daadiyo waayo qofka soomaaliga dhiigiisa iyo xuquudiisa waxay la mid tahay kuwa dadka kale ee addunka oo haddii uusan adduunka kala jeclayn dhibta haysata Soomaalida waa qasab in Soomaalida naftooda xalistaan wixii xal u ah dantooda oo aanay dulmi iyo xadgudub isku samayn. Goormaa ayuu dhiigga Soomaalida qiimo yeelan doonaa?
Faafin: SomaliTalk.com | Jan 29, 2004